Chọpụta China na nkuku ya nke ị na-agaghị echefu Akụkọ Njem
Mariela Carril | | China, omenala, General, Nduzi, Oge ntụrụndụ, Asia njem
Ikekwe ọtụtụ dị ugbu a achọpụta ChinaMa, ọ bụ otu n’ime mba ndị kasị ochie n’ụwa ma nwee otu n’ime ọdịbendị kachasị adọrọ mmasị. Ọ bara uru ịga njem na ịmara ya, mana ọ bụghị na njem dị mfe na ngwa ngwa kama iji ihe dị obere kpọrọ ihe ma dịrị njikere nke ọma dịka o kwere mee.
Otu mba, China ma ọ bụ nke ọzọ, na-atọ ụtọ karịa mgbe ị matara ihe gbasara akụkọ ntolite ya, ọdịbendị ya, ọdịdị ala ya. Mgbe ị matara ebe ị nọ, gịnị kpatara eji wuo ụdị ihe a, gịnị kpatara ụdị ọzọ ahụ ji mee. Nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma iji bịaruo nso na njem ahụ bụ nke anyị na-agwa taa na Actualidad Viajes: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara China tupu ị gawa.
1 Obere akụkọ banyere China
2 Omenala ndị China
3 Gburugburu ala China
4 Ebe nkiri na China
Obere akụkọ banyere China
Han usoro ndị eze
E zoro akụkọ ihe mere eme nke mba ọ bụla na nsogbu nke oge, na agbụrụ dị iche iche na-abawanye ruo mgbe, ka oge na-aga, inye alaeze nke oge a, alaeze ma ọ bụ mba dị iche iche.
China nwere puku afọ ise nke akụkọ ntolite ma nkewa kewara n'ime oge ise: Primitive Society, Slave Society, Feudal Society, Semi-feudal na Semi-colonial na Socialist Society. Site na oge ise a ndị isi dị ike na-apụta, enwere agha obodo na ọtụtụ usoro ndị eze na-apụta ma daa ọtụtụ narị afọ ruo mgbe nguzobe nke ndi mmadu nke China na 1949 na ịkwatu ala-eze rue mgbe ebighi ebi.
Ndị eze Tang
N'etiti ndị eze mara amara ma dị mkpas, nke gosipụtara mmepe nke mmepeanya China, anyị nwere ike ịkpọ Yuan, Ming, Qing, Song na Tang Dynasties. Nke ikpeazu abụrụla otu n'ime ihe kachasị amata n'ihi na ọ dugara China ịbụ mba dị ike ma baa ọgaranya, otu ihe ahụ mekwara Ọchịchị Ming, oge nke ikeketeorị malitere ịmalite na China na ụlọ ọrụ nke poselin na n'ikpeazụ Obodo mmepe na ahịa dị mma, nzọ ụkwụ n'okporo ụzọ gaa ọha mmadụ nke oge a.
Ikpeazụ Emperor nke China
Ọchịchị China ikpeazụ bụ Qing, onye eze ukwu ya, Pu Yi, banyere n'akụkọ ihe mere eme site na ịghọ Emperor nke Ikpeazụ nke China na mmalite narị afọ nke XNUMX.
Omenala ndị China
Anyị niile maara na ọdịnala ndị China dị egwu. Ọrụ nka na nka ndị China bụ akụ abụọ bara ezigbo uru. N'ime puku afọ ise nke akụkọ ntolite, ndị omenkà ndị China emebeghị ihe ọ bụla ma e wezụga ike ihe dị ebube na ihe ọ bụla ha nwere na mkpịsị aka ha. Ha enyekwala ndụ opera ndị mara mma, egwu pụrụ iche na egwu na-adịghị anwụ anwụ, ha atụgharịwo uche na mmadụ, n'okpukpe ma jikwa nlezianya hụ kpakpando na mmegharị ha.
El china puta, metal metal maara dị ka Obochi, arịa ọla kọpa, calligraphy nke Chinanke Ihe mkpuchi, ihe egwuregwu ụmụaka, kita eji akwukwo na achara, lacquered arịa na agba di iche iche.
Ihe mkpuchi Chinese
Ọzọkwa nke stampụ China eji igwe, jed, ezé anumanu ma obu mpi, ndi popet aterlọ ihe nkiri na n'ezie, silk na ngwaahịa niile enwetara site na eri silk nke ikpuru dị mfe nwere ike kpaa na obere ụbọchị 28 nke ndụ ya. Ihe a niile bụ akụkụ nke ọdịnala ọdịnala nke ndị China.
Stampụ ndị China
Taa, akwụkwọ sayensị na ọgwụ na-eme ka ọdịbendị a baa ọgaranya na ụfọdụ ndị na-ewepụta ya abụrụla ezigbo onyinye iji weta ezinụlọ anyị na ndị enyi anyị.
Gburugburu ala China
Site na Maapụ Asia na aka anyị na-ahụ China na-bụ obodo enorme nke na-aga ihe dịka puku kilomita ise. E kewara ya na mpaghara ise: East China, nkewawara mpaghara atọ ọzọ, Tibet na Xinjiang - Mongolia.
Ọnọdụ ala China dị iche iche ma nwee ugwu, ala ahịhịa, glasia, ugwu nta, dunes, karst terrain, volcanic calderas, osimiri na oke ohia. Na mgbakwunye, n'ala ndị Tibet ọ bụ ugwu kachasị elu n’ụwa, Ugwu Everest (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku mita itoolu n'ịdị elu), nke ugwu ndị ọzọ dị elu gbara ya gburugburu, nke mere eji mara mpaghara a dị ka "elu ụwa."
China nwere puku mmiri iri ise ọtụtụ na-asọba na Pacific. Na Osimiri Yangtze Ọ bụ osimiri kachasị mkpa, nwere kilomita 6300 n'azụ Amazon na Nile.E wuru ọdọ mmiri atọ a ma ama na ya, ihe ịtụnanya nke injinia ọhụụ. E nwekwara Osimiri Yellow nke nwere ihe kariri puku kilomita ise. Na osimiri gbara gburugburu bụ na mmepeanya ndị China na-eto eto.
Ekwesiri ikwu na ebe China bu nnukwu obodo e nwere ihu igwe dị iche iche na na-enye ohere n'ebe ahụ osisi dị iche iche na anụmanụ nke ọ bụla n'ime mpaghara ndị a. Ọ bụ ya mere e ji nwee kamel na ịnyịnya dịka agụ owuru, enwe, nkịta ọhịa, antelopes ma ọ bụ panda.
Ebe nkiri na China
Machibidoro Iwu City
Ọtụtụ ndị njem nleta na-etinye uche naanị n'otu akụkụ nke China: Beijing, Xian, Shanghai, Hong Kong. Aghọtara m ha, ha bụ ebe dị mfe ịbanye na ọtụtụ ebe nkiri. Mana China buru ibu, yabụ ọ bụrụ na akpịrị na-akpọ gị nkụ maka njem, ihe kachasị mma bụ ịhapụ otu ọnwa zuru oke ma dịrị njikere ịga ọtụtụ.
Na Beijing, anyị enweghị ike ịhapụ uche Machibidoro Iwu City, obodo ochie nke alaeze ukwu nwere ọtụtụ narị ụlọ na ọtụtụ puku ụlọ nzukọ. Ana m akwado ile ihe nkiri ahụ tupu Ikpeazụ Emperor Ọfọn, a na-ese ya ebe ahụ ma ọ na-enye anyị ezigbo nkuzi maka ije na akụkọ ihe mere eme.
Bụkwa Ogige Tinanamen, nke Mao nke Mao, nke Ama egwuregwu mba, nke Templelọ Nsọ Eluigwe, na Ming Ili, nke N'oge okpomọkụ Obí, ngalaba nke Mgbidi China ndị ahụ dị nso na Ogbe, omenala ndị obodo Chinat nke dị warara na ụlọ ochie na ogige.
En Hong Kong, na ndịda ọwụwa anyanwụ ụsọ oké osimiri China, ị ga-agarịrị Victoria Bay iji tụgharịa uche na mbara ala nke ụlọ elu elu igwe, Victoria Ọnụ, ugwu nke nwere ike iru tram, na Okporo ụzọ nke Kpakpando, nke Wong Tai Sin Temple, Ogige Causeway, Repulse Bay wee jee ije ma jee ije.
En Shanghai okporo ámá kacha mma Jzọ Nanjing. E nwere Shanghai Museum, ndị Orie Pearl Tower, nke Templelọ Jade Buddha, The Bund na Ogige Ubi Yuyuan mara mma. Dị ka njem m nwere ike ikwu ghara uche narị afọ "aquatic obodo" nke Qibao y Zhujiajiao.
Maka ụdị ọdịdị China, ọ bụ Guilin: ugwu, ọdọ, osimiri, achara, ọhịa ndị mara mma. Na Guilin ndị njem nleta bụ Ọgba nke Red Flute, na Elephant Trunk Ugwu, asaa Stars Park, osikapa teres na njem ụgbọ mmiri na Osimiri Li.
Ndị agha Terracotta
Xian bụ obodo nwere ihe karịrị puku afọ atọ nke akụkọ ntolite na ebe nkiri ya gụnyere: Ndị agha Terracotta, mgbidi kacha mma echekwara na China, Bell Tower, thelọ Famen, Giant Goose Pagoda, thelọ Tang na di na nwunye dynastic na-adọrọ mmasị.
Tibet Ọ bụ mpaghara kwụụrụ onwe ya ma chọọ ikike puru iche ịbanye. Ozugbo n'ime nleta ndị amanyere bụ iwu Lhasa, isi obodo, na n'okporo ámá ya na ụlọ arụsị ya: Sera, Ganden na Deprung, ọkachasị. Ahapụkwala ịgakwuru ya Ọdọ mmiri Celestial, ọdọ mmiri dị nsọ nke dị na elu 4720 mita.
E nwere obodo Tibet ọzọ a na-akpọ Shigatse Ọ bara uru ịmara na ebe obibi ndị mọnk Tashihunpo na Shalu na mbụ. E nwekwara Obí nke Panchen Lama.
Ọ bụrụ na ọ bụ banyere mara mma osimiri ị ga-mara Sanya, obodo gbara osimiri site na mpaghara Hainan nke maara etu esi ejikọ ugwu, oke osimiri, osimiri, obodo na ụsọ mmiri nke ọma. Na-esote n'ụsọ oké osimiri bụ Xiamen, ma na mpaghara Fujian, otu n'ime obodo ọdụ ụgbọ mmiri kachasị mkpa na China ruo ọtụtụ narị afọ.
Na ịlafu na China enweghị ihe dịka Mongolia dị n'ime. Ọ bụ mpaghara kwụụrụ onwe ya nke dị n’etiti Republic of Mongolia na Russia. Ọ bụ mpaghara China kachasịnụ wee gbasaa na nke atọ. O nwere nde iri abụọ na anọ na ọtụtụ agbụrụ.
Dika ihu igwe na-agbanwe nke ukwuu n’etiti afo, o di nma izere oge oyi na ogologo oge oyi ma were oge okpomoku na, obu ezie na odi nkpa, di oku. Ọ bụ ala nke Genghis Khan ya mere enwere Genghis Khan Museum, mana enwekwara ụlọ arụsị, pagodas na ahịhịa ndụ na ahịhịa ndụ na mbara ala ebe ndị njem nleta nwere ike nweta usoro ndụ Mongolian na-awagharị awagharị. Ihe obi uto.
Eziokwu bụ na China bụ obodo na-adọrọ mmasị ma emezughị m ihe niile m gwara, mana nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere ya ọpụrụiche: ọ nweghị ihe ha gwara gị, ole ka ị gụrụ, foto ole ịlere anya . China ga-adịkarị mgbe ị mechara leta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » Fọdụ ihe na-atọ ụtọ banyere China: akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị, ọdịdị ala na ebe nkiri
ana azano dijo
Ihe ị kwuru bara ezigbo uru, aga m aga China na Eprel, m ga-etinye ha n'uche
Zaghachi ana azzano
Ihe ị ga-ahụ na Liechtenstein
Ọmarịcha Perito Moreno Glacier, na Argentina